SomaliTalk.com » Liibiya
Home » Qoraallada Halkudhegga "Liibiya"
Dib u eegista 2011 iyo dhacdoyinkii ugu waa weynaa.
Waxay ahayd subax jimca ah 17/12/2010 dhamaadkii sanadkii hore markii uu dab jirkiisa qabadsiiyay wiil udhashay dalka tuunis, isala bishaasi 18keedii waxaa kacdoon sameeyay shacabkii magaalada uu kudhashay wiilkaasi, kacdoonkaasi cirka ayuu isku shareeray waxa uuna soo gaaray magaalooyinkii waaweeynaa sida caasimada tuunis. 14 bishii koobaad ee sanadka ayaa waxaa orad isku taabtay oo cagaha wax ka...
Halkudheg: Liibiya, masar
Warsaxaafadeed ay ka soo baxay DFKMG ayaa sheegay in safiirkii Liibiya u fadhiyey Muqdisho in la siiyey magan-galyo siyaasadeed kaddib markii uu iska casilay safiirnimadiisii… Warsaxaafadeedkaas hoos ka akhri. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada FKMG Soomaaliya iyo Safiirka Liibiya u fadhiya dalka Soomaaliya oo baaq wada jir ah u jeediyay shacabka Liibiya 01.03.2011——–Ra’iisul...
Tripoli: Shirkii Ururada arimaha bulshada dalalka Greate Sahra oo arimaha somalia lagu falan qeeyay
Waxaa lagu soo xiray magaalada Tripoli ee dalka Libya, shirwayihii 5 ee dallada Ururada arimaha bulshada ee wadamada Greate Sahara . shirkaas waxaa kasoo qayb galay 400 oo isugu jira NGO iyo odayaal dhaqameed iyo culuma udiin iyo aqoon yahan. Halkan ka daawo sawirada Shirkkaan balaaran oo socday 3 malmood ayaa waxaa looga hadlay arima badan oo khuseeya wadamada Sahara wayn, oo ay dhamaan wadamada...